पाठकको पालो :: NepalPlus
मे १७, २०१३
● सिद्धिचरण भटराई ‘बैदेशिक दासत्व र पराधिनता हामीलाई स्वीकार्य छैन, शत्रुता हाम्रो चाहना होइन । पञ्चशिल र पारस्परिक लाभमा आधारित संझौताहरुको नविकरण’ नै हाम्रो विदेश सम्वन्धको दृष्टिकोण हो । ‘देशको आधारभुत स्थितीको निर्णायक तत्व उत्पादन पद्धति हो...
‘त्यो नेपाल’ पढेपछि
अप्रिल २५, २०१३
● सिद्धिचरण भटराई / भैरहवा ‘भिरको बाटो खनी खनी मोटर ल्यायो कुइरेले’ भन्ने गित सानैमा सुन्थें । मैले कुइरेहरु देखेको थिइन । म स्यांग्जाको बिर्घास्थित जनता माविमा ८ कक्षामा भर्ना भएपछि त्यहाँ एकजना कुइरेनी देखेको थिएँ ।...
सरि सर, गर्दिन अबदेखि !
● सोमना थारु / बेल्जियम घमाइलो मौसमको दिन । बाटोमा धेरै मानिसहरु ओहोर दोहर गरीरहेका देखिन्थे । छोटाछोटा र पातला पहिरनमा आखाँमा कालो चश्मा । कोही पैदल । कोही साइकलमा विभिन्न रङ र विरङमा । कोही छाना...
कम्बोडियाको जेलमा एक नेपालीको क्रन्दन
फ्रेब्रवरी ६, २०१३
● दिपेन योङहाङ लिम्बु / कम्बोडिया “रुँदैछ नेपाल प्राइस जेलभित्र छैनन् सुन्ने देख्ने त्यहाँको बिचित्र छतमुनी चार गोठालो छन भित्ताहरु लाग्छ त्यो खामेरुजको भट्किएको आत्माहरू अनगिन्ति भाषामा कोरिएकाछ्न अक्षरहरु ति आत्मा भित्र आफ्नै मानचित्र खोज्दैछन नजरले अक्षरहरुको...
महिला अधिकारकर्मीहरु नै विवाह गराउने लमी वनेपछि…….
जनवरी २५, २०१३
● मनिष दुवाडी / धादिङ हिजोआज नेपालका हरेक जसो पत्रपत्रिकाहरु बिद्दुतिय सञ्चार माध्यम अनि टेलिभिजनहरुमा महिला हिंसा संवन्धि समाचारहरु आइरहेका हुन्छन । यो भन्दा अगाडी यस्ता समाचार त्यति धेरै आउँथेनन् । सायद सार्वजनिक हुन सक्दैन थियो होला...
कहिले सुन्ने सरकारले पसिनामा पैसा साट्नेका पीडा ?
सेप्टेम्बर २३, २०१२
∙ उमेश अधिकारी देशमा गरीब निमुखाका सरकार बनेको छ भन्छन माओबादका नारारुपी डम्फु बजाउनेहरु । तर वास्तविता अर्कै छ । नेपाली युवा देशका भबिष्य हुन । स्वदेशमा रोजगारीको वाताबरण श्रृजना गर्न तिनै जनताले चुनेर पठाएका नेता छन्...
सेप्टेम्बर ११, २०१२
● पुष्प बरुवाल /एम्स्टरडम, नेदरल्याण्ड भोली आइतबार कहिले आउँला र आमस्टरडमको ट्रेन स्टेसनमा जाउँला भन्ने कुथुल्कीले होला शनिवारको निन्द्रालाई असर पर्दै थियो । मन झनझनै उत्साहित हुँदैथियो । करिब पाँच वर्षदेखि नियमित पुग्ने गरेको, अझ भनौं कहिलेकही त...
जातिय राजनिति गर्नु भन्दा जिम्मेवार नागरिक बन्ने कि ?
मे १९, २०१२
• सागर सुबेदी / भियना, अष्ट्रिया आदरणिय मित्रहरू, एउटा जिम्मेबार नागरिक हुनुको कर्तब्य के हो ? किन हाम्रो देश् संसारमा गरीबमाथि गरीब हुँदै छ । हामीसँगै बिकासको पथमा उक्लिन सुरु गरेका मुलुकहरू अहिले कहाँ छन् ? प्रक्रितिले भरिपुर्ण हाम्रो सानो मुलुक यतिबिघ्न...
‘हेल्लो स्वीट’ र ‘नमस्ते पेन’ यात्रा
नोभेम्बर ९, २०११
● प्रवेश सुवेदी काठमाडौं पूर्वका हिमाली क्षेत्र चहार्ने रहर पुरानै हो । हप्तौंको पैदलका लागि फुर्सद निकाल्नै मुस्किल । फेरी फुर्सद निस्कँदा गोजीपनि खँदिलो हुनुपर्‍यो । मौसम राम्रो नभए कुहिरो र बादलले कयौंदिन हिमालको मुखसम्म हेर्न दिँदैनन्...
जनवरी ८, २०११
-शिव सापकोटा / भियना, अस्ट्रिया विदेशमा गए धन कमाइन्छ । जीवन सुखी हुन्छ भन्ने धेरै नेपालीको आत्माबाटै आउने भ्रमले गर्दा आफ्नो जन्मभूमि नेपाल लाई धेरै टाढा छोडेर विदेश यात्रा सुरु गर्छन् एक जवान । घरबाट विदेश जाने...